JINGHPAW KASA: ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၂) နယ်မြေတွင် ဗမာစစ်သား (၃) ဦးကျ
ကေအိုင်အေတပ်ရင်း (၂) နယ်မြေတွင် ဗမာစစ်သား (၃) ဦးကျ
အောက်တိုလာ (၁၃) စနေ
ကချင်ပြည်နယ် ကေအိုင်အို အစိုးရ ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်း တပ်မဟာ (၄) နယ်မြေဖြစ်သော မုံဂျီ ဘက်မှ ထိုးစစ်ဆင်လာသော ဗမာအစိုးရစစ်တပ်များကို ကေအိုင်အေ တပ်ရင်း (၂) မျိုးချစ်ရဲဘော်များမှ အောက်တိုဘာ (၁၂) ရက် နေ့လည်ပိုင်း (၁း၃၀) နာရီခန့်အချိန်တွင် မန်းဆာရွာ၌ မိုင်းများဖြင့် ဆီးကြို ဆိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဤတိုက်ပွဲတွင် ဗမာအစိုးရ စစ်တပ်ဘက်မှ (၃) ဦးသေဆုံး ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဗမာအစိုးရ သမ္မတဦးသိန်းစိန်အနေဖြင့် ကေအိုင်အို အစိုးရကို ထိုးစစ်ဆင် တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိဟု ကမ္ဘာပတ် လှည့်လိမ်နေသော်လည်း ဗမာအစိုးရ၏ စစ်တပ်များသည် ကေအိုင်အိုအစိုးရ ထိန်းချုပ်ရာ နယ်မြေများသို့ စစ်အင်အား၊ လက်နက်အင်းအား အများအပြားဖြင့် ထိုးစစ်ဆင် နေလျက်ရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။
“There is no attacking to the KIA”, said Myanmar president Thein Sein to the international communities at the last UN general assembly. Actually he is liar on the KIA civil war, practically there are many Burmese troops have invaded and attacked the KIA. The KIA makes resistance war from the very beginning of the war last year, 2011. Here is another evidence’s of Thein Sein liar. (3) Burmese soldiers killed in near the Man Hsar village on 12th October, according to the KIA front-line report. At 1:30 on that day, the Burmese soldiers troops from Mung Ji, attacked the KIA (2) battalion, which is under KIA (4th) brigade area. Thus the KIA (2) battalion re-attacked with remote controlled mine for preventing themselves.